MTP [သင်ခန်းစာ] | ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ Android ကို Ubuntu နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့၏ Linux Ubuntu operating system တွင်ကျွန်ုပ်တို့စံအဖြစ်မလုပ်ဆောင်နိူင်သည့်အရာတစ်ခုမှာ၊ သင်၏ Android ကို Ubuntu ကို MTP သုံး၍ ဆက်သွယ်ပါ.
အောက်ဖော်ပြပါလက်တွေ့ကျသောသင်ခန်းစာတွင်အသုံးပြုသူများကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြသွားပါမည် Ubuntu ကို Debian အခြေပြု Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များအတွက်ဖြစ်သည် သင်၏ Android ကို Ubuntu ကို MTP သုံး၍ ဆက်သွယ်ပါ.
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက Android terminal ရဲ့ setting ကနေ၊ MTP ဆက်သွယ်မှုကို enable အရာယေဘုယျစည်းမျဉ်းအဖြစ်များသောအားဖြင့်၌တည်ရှိ၏ Setting / PC connection / USB connection method ကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ Android အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စိတ်ကြိုက်အလွှာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဤအရာပြီးသည်နှင့်စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုပဲ၊ terminal အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ပါ ငါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာ:
ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် အသစ်က repository ကိုထည့်ပါ ကျွန်တော်တို့ဒီ command line ကိုရိုက်နှိပ်ပြီးသုံးမယ်။
sudo add-apt-repository ppa: webupd8team / မတည်မငြိမ်
ကိုနှိပ်ပါ ဝင်ရောက် repository အသစ်၏ပါဝင်မှုကိုလက်ခံပြီးတော့ အထုပ်စာရင်းကို update လုပ်ပါ အောက်ပါ command ဖြင့်:
ယခုကျွန်ုပ်တို့ application ကို install လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည် သင်၏ Android ကို Ubuntu ကို MTP သုံး၍ ဆက်သွယ်ပါ:
sudo apt-get install go-mtpfs ကိုသုံးပါ
နောက်ဆုံးတွင် toolbar သို့ launcher အသစ်တစ်ခုထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ကျွန်တော်တို့ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် MTP ကိုသုံးပြီး Android နှင့် Ubuntu ဆက်သွယ်မှု:
sudo apt-get ထည့်သွင်းပါ။ go-mtpfs-unity
က app launcher အောက်ပါပုံတွင်ကဲ့သို့ -
ဒီပုံမပေါ်ဘူးဆိုရင်၊ dash, ငါတို့ရိုက် MTP အိုင်ကွန်ကိုဆွဲချခြင်းဖြင့်သာ ညီညွတ်ရေးဘား ပရိုဂရမ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးရန်၎င်းကိုချန်ထားမည်။
မသန်စွမ်း ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကို MTP မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပါAndroid setting မှ activate လုပ်ပြီး USB cable မှတစ်ဆင့်၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လုံလောက်သည် Ubuntu PC။ ထို့နောက်ဘားအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး, ညာဘက် mouse ကိုခလုတ်နှင့်အတူကျွန်တော်ဒီ option ကိုရွေးပါ Android ဖုန်းကို Mount လုပ်ပါ ကိရိယာကို mount လုပ်ဖို့၊ Android ဖုန်းကိုဖြုတ်လိုက်ပါ app ကိုမှလုံခြုံစွာ disassemble ရန်။
ဤရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာဖြင့်သင်ရရှိလိမ့်မည် သင်၏ Android ကို Ubuntu ကို MTP သုံး၍ ဆက်သွယ်ပါ ပြတင်းပေါက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဖြင့်ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုဖလှယ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » သင်၏ Android ကို Ubuntu နှင့် MTP သုံး၍ မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း
Manuel Tornos mtornos ဟုသူကပြောသည်
မည်သည့် Ubuntu ဗားရှင်းနှင့်သင်အလုပ်လုပ်သည်ကိုမသိသော်လည်းနောက်ဆုံးသုံးခုသည် MTP (နှင့်အန်ဒရိုက် android ဟောင်းများကဲ့သို့တိုက်ရိုက် drive) ကိုထိစရာမလိုဘဲတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။3LTS (အများဆုံးထောက်ခံချက်)၊ 14.04 နှင့် 13.10 ။
mtornosManuel Tornos အားပြန်ပြောပါ
14.04 နှင့် bq E 4.5 နှင့်အတူငါနှင့်အတူမိုဘိုင်း၏မှတ်ဉာဏ်ပေါ်လာပေမယ့်ငါမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုမမြင်ရ။
ဟယ်လို! go-mtpfs အထုပ်ကိုရှာလို့မရဘူးပြောတယ် ကျွန်တော် Linux အတွက်အသစ်တစ်ခုပါ။ မဆိုအကြံပြုချက်?